एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो फुर्सदलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ ? (योजनाहरू सहित) « Salleri Khabar
(Sunday 20th October 2019)
शैक्षिक महोत्सवको माहोल तात्दै,सातौं दिनसम्म ५७ लाख रकम जुट्यो
जहाँ घरमै पुगेर प्रदान गरिन्छ वृद्धभत्ता…
सँगै सुतेका थापालाई घिसार्दै लगेर खाल्डोमा पुरेपछि…
एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो फुर्सदलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ ? (योजनाहरू सहित)
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सकाएका विद्यार्थीहरू अहिले केही समय फुर्सदिला भएका छन् । परीक्षापछिको फुर्सद सबै विद्यार्थीका लागि साह्रै आनन्ददायक हुन्छ । नतिजा नआउन्जेलसम्मको समय अक्सर सबैजसो विद्यार्थीहरूले त्यसै खेर फाल्ने गरेको पाइन्छ ।
तर यो समयलाई पनि सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सकियो भने त्यो जीवनभरका लागि लाभदायी हुनसक्छ । त्यतिमात्र नभएर फुर्सदको समयमा नानाथरीका कुरा सोचिने भएकाले गलत बाटो रोज्नसक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले पनि समय मै सचेत र सजक हुनु आवश्यक छ ।
यो समयलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सकियो भने सकारात्मक परिणाम हात पार्न सकिन्छ । एसईई पछिको छोटो अवधिलाई विद्यार्थीले आफ्नो हितमा अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ, त्यसैले विद्यार्थीहरूले यो फुर्सदलाई के-कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने योजना बनाउन आवश्यक छ ।
पढ्नुहोस् केही उपयुक्त योजनाहरूः
१. केही रचनात्मक कुराहरू सिक्ने
परीक्षापछिको फुर्सद सिर्जनात्मक कुराहरू सिक्ने ठूलो अवसर पनि हो । यो आफूलाई मन पर्ने कलाका क्षेत्रहरू नृत्य, गायन, अभिनय, चित्रकला सिक्ने, कविता, कथा, निबन्ध आदि लेख्न अभ्यास गर्ने उपयुक्त समय हो । नयाँ कुरा सिक्नु वा सिर्जना गर्नु निकै रमाइलो र फाइदाजनक हुन्छ ।
सिर्जनात्मक एवं रचनात्मक कामले मन–मस्तिष्कलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्ने भएकाले परीक्षापछिको फुर्सदलाई सिर्जनात्मक काममा लगाउनुपर्छ ।
२. रमाइलो तथा भ्रमण / घुमघाम गर्ने
परीक्षाका बेला पढाइले थाकेका विद्यार्थीहरू परीक्षा सकिनासाथ घुमघाम तथा मनोरञ्जनका योजना बनाउँछन् । वास्तवमा यो नराम्रो होइन । खान, सुत्न पनि बिर्सेर परीक्षाको तयारीमा लागेकाहरू परीक्षापछि तनावपूर्ण दिन बिताउन चाहने कुरै भएन ।
घुमघाम, नयाँ ठाउँहरू अवलोकन तथा जानकारी लिने कामले दिमागलाई फराकिलो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । घुम्दा पनि धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ । देखेर सिकेको कुराले दिर्घकालिन फाइदा पुर्‍याउँछ । त्यसबाहेक ज्ञानबर्द्धक टेलिसिरियल तथा चलचित्र हेरेर पनि मनोरञ्जन गर्न सकिन्छ ।
३. भविष्यबारेको योजना बनाउने
एसईईपछिको कक्षा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भयो भने त्यसको पाठ्क्रमका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिसँग भेटेर आफ्नो मनले रोजेको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजना बनाउन थाल्नुपर्छ । एसईईपछिका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर संचालित परामर्श वा व्यक्तित्व विकासका कक्षाहरूमा सहभागिता जनाउन सकिन्छ ।
४. ब्रिजकोर्स पढ्ने तथा सीपमुलक ट्रेनिङ लिने
एसईईपछि धेरै विद्यार्थीको ध्यान ब्रिजकोर्स एवं सीपमूलक तालिमतर्फ तानिएको हुन्छ । आफ्नो रुचि एवं चाहनाअनुरूप सिप सिक्नु नराम्रो होइन । यस क्रममा ब्रिजकोर्स अर्थात विशेष शिक्षा लिन सकिन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भर्नापूर्व विद्यार्थीले रुचाएको विषय अध्ययनका लागि तयारी कक्षा लिनु पनि फलदायी हुन्छ । सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थी कत्तिको जानकार छ भनेर लिइने यो परीक्षाले नै क्याम्पसमा भर्ना पाउने वा नपाउने कुराको निधो गर्छ ।
एसईई पछिको फुर्सदमा ‘ब्रिज कोर्स’ पढ्नु किन आवश्यक छ ?
त्यसैले यस्तो परीक्षामा राम्रो तयारी गरेर उत्कृष्ट नम्बर ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसबाहेक कम्प्युटर तालिम तथा विभिन्न भाषाका कक्षा, उद्घोषण, अभिनय तथा नाटकमा रुचि भए सम्बन्धित विषयको तालिम लिन सकिन्छ ।
५. मनपसन्द / उपयोगी किताब पढ्ने
कोर्सका पुस्तक पढेर थाकेकाहरूले परीक्षा सकिएपछि अतिरिक्त पुस्तक पढ्न सक्छन् । कलेज भर्ना हुनासाथ कोर्सका पुस्तक पढ्ने बोझ हुने भएकाले यो समयमा आफूलाई मन परेका उपन्यास, कथा, आत्मकथा, प्रसिद्ध व्यक्तिका जीवनी आदि पढ्न सकिन्छ ।
यस्ता पुस्तक पढ्दा लेख्ने शैली तथा सिर्जनात्मक क्षमताको पनि विकास हुन्छ । यसका लागि विज्ञानमा रुची भएका विद्यार्थीले वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानसम्बन्धी पुस्तक रोज्नुपर्छ ।
राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री बन्न चाहनेहरूले तिनै विषयका पुस्तक पढ्नुपर्छ । प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्ने हो भने त्यसैसँग सम्बन्धित पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्छ । यसरी फुर्सदमा पढ्ने बानी बसाल्दा सधैंभरिलाई फाइदा हुन्छ । पछि कलेजको कोर्स पढ्दा यस्ता अतिरिक्त पुस्तकबाट हासिल गरेको ज्ञानले उच्च शिक्षामा समेत मद्दत मिल्छ ।
६. सामाजिक कार्यहरू गर्ने
परीक्षा सकिएपछि मानसिक थकान बिसाएर समाजसेवा गर्नु उत्तम हुन्छ । यसले समाजलाई त फाइदा पुग्छ नै आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ । भविष्यमा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहनेहरूलाई छात्राबृत्तिमा आवेदन दिंदा सहयोग मिल्छ ।
स्कलरसिपमा अब्रोड स्टडी गर्न जानेहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा अब्बल त हुनैपर्छ त्यसबाहेक समाजसेवाका क्षेत्रमा आफ्नो योगदानको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्छ । त्यसो हुनाले गाउँठाउँका सामाजिक संघ, संस्था तथा क्लबहरू अर्थात स्वयमसेवी संस्थाहरूमार्फत समाजसेवा गरेर अनुभव लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
७. आम्दानीमुलक कामहरू गर्ने
एसईईपछि थप अध्ययन गर्ने इच्छा हुँदादुँदै पनि कतिपय विद्यार्थीको पारिवारिक अवस्था कमजोर हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका एवं मध्यमवर्गीय विद्यार्थीले फुर्सदको समयलाई आय आर्जनको काममा लगाउन सक्छन् । आत्मनिर्भर भइने र परिवारलाई समेत सहयोग पुग्ने भएकाले यस्ता कार्यमा लाग्नु धेरै राम्रो हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि यो बाध्यता पनि हो ।
विभिन्न सेवा तथा वस्तुको मार्केटिङ, कुनै कार्यालयको काम, खेती–किसानी आदि क्षेत्रमा लाग्नु भविष्यका लागि अनुभव बटुल्नु पनि हो । कतिपय संघ–संस्थाले दैनिक भत्ता दिएर सामाजिक सेवामा अवसर दिने भएकाले त्यसमा पनि समय दिन सकिन्छ ।
८. घरायसी काममा सघाउने
यो फुर्सदको समयमा घरमा भान्साको काम सिक्न पनि सकिन्छ । कसरी खाना पकाउने, कसरी तरकारी काट्ने, कसरी भाँडावर्तन सफा गर्ने, कसरी कुचो लगाउने लगायत । यस्ता कामले व्यक्तिको क्षमतामा पनि विकास हुनुका साथै श्रमको मूल्य पनि बुझ्न मद्दत पुग्छ । साथै घर परिवारमा सहयोग गर्ने संस्कारको विकास हुन्छ ।
भोलि रिजल्ट आएसँगै विद्यार्थीहरू घर परिवारभन्दा बाहिर बसेर पढ्नु पर्ने हुन सक्छ । अब्रोड स्टडीका लागि समुद्र पारका मुलुकमा पुग्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यतिबेला उनीहरुले आफै खाना पकाउनु पर्ने, आफै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि यो काइदाको समय हुन सक्छ, यी सबै सिक्नका लागि ।
९. खेल खेल्ने
विदाको सदुपयोग गर्ने एउटा अर्को उपाय हो – खेलकुदमा प्रेरित हुने । अहिले धेरैजसो बच्चाहरु मोवाइल वा ल्यापटपमा गेम खेलेर समय विताउँछन् । उनीहरुलाई आउटडोर गेममा प्रेरित गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा उनीहरुमा मोवाइल, ल्यापटपको गेमको आशक्ति छुट्न सहयोग हुन्छ । आउटडोर गेमले उनीहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा एकदमै सहयोग गर्छ ।
फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, टेनिस जस्ता कुनैपनि उनीहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । साथै, मार्सल आर्टजस्ता खेलहरुमा पनि लगाउन सकिन्छ । यसले उनीहरुको शारीरिक विकास मात्र हुँदैन, अन्य किसिमको क्षमता विकास पनि हुन्छ ।
सारांशमा, एसईई दिएर बसेका सम्पुर्ण विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो फुर्सदको समय कसरी बिताउने भन्ने छनौटको जिम्मा आ-आफ्नै हातमा छ । तर यसलाई सबैले राम्रोसँग योजना बनाएर रमाइलो गर्दै, हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै अनि केही सिक्दै पनि यसको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
यसबारे विद्यार्थी स्वयम तथा उनीहरूका अभिभावक / आफन्तले पनि सक्दो सहयोग गर्न जरुरी छ ।
तस्बिर स्रोतः गुगल
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका प्राडा सुधा त्रिपाठीले दुई पद लिन मिल्ने कि
प्लस टु पछिका बाटाहरू…
पढाईका हिसाबले भन्दा प्लस टु सक्नु एक समझदार व्यक्ति हुनु हो । तर, समझदारका लागि
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
सबै विषयको परीक्षाफल बोर्डले एकै पटक सार्वजनिक गरेको हो ।
कक्षा १२ को नतिजा आज सोमबार सार्वजनिक हुँदै, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७६ सालमा सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को नतिजा सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको